Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.1 Introduction
Wikipedia inoshamisa. Kushandira pamwe kukuru kwevadzidzi vanoita bhuku rakanakisisa rinowanikwa kune vose. Chinokosha kubudirira kwe Wikipedia chakanga chisiri ruzivo rutsva; asi, iyo yaiva nzira itsva yekushandira pamwe. Zera re digital, nenyasha, rinogonesa maitiro matsva ekubatana. Nokudaro, tinofanira kunge tichibvunza kuti: Ndeapi matambudziko makuru esayenzi-matambudziko atasagona kugadzirisa mumwe nomumwe-zvatinokwanisa kuita iye zvino?
Kune marudzi akawanda ekubatana kwevanhu vakawanda, uye masayendisiti masayendisiti anowanzogadzirisa muzvikamu zvakawanda zvezvikamu zvichienderana nehutano hwavo (Quinn and Bederson 2011) . Muchitsauko ichi, zvisinei, ndichaenda kunoronga mapurogiramu makuru ekubatanidza kubva pane zvaanokwanisa kushandiswa pakutsvakurudza kwevanhu. Kunyanya, ndinofunga kuti zvinobatsira kuti zvive nyore kusiyanisa pakati pemhando mitatu yemapurojekiti: kuverenga kwevanhu , kushevedza , uye kugovera dhikanho rokuunganidza (Mufananidzo 5.1).
Ndichatsanangura imwe neimwe yemhando iyi zvakanyanyisa gare gare muchitsauko, asi ikozvino regai ndirondedzere imwe neimwe muchidimbu. Mapurogiramu ekuverengera kwevanhu anonyatsokodzera kuti zvive nyore-basa-guru-guru zvinetso zvakadai sokuisa mifananidzo mamiriyoni. Aya ndiwo mapurogiramu ayo munguva yakapfuura angangodaro akaitwa nevanodzidza pasi pepayidiresi vatsvakurudzo. Mipiro hairevi unyanzvi hune chokuita nebasa, uye kuguma kwekupedzisira kunowanzove kuenzanisa zvipo zvose. Muenzaniso wekare wepurogiramu yehuwandu hwevanhu ndeyeGalaxy Zoo, apo mazana ezvipiri vanozvipira vakabatsira nyanzvi dzenyeredzi kuisa magiraxi miriyoni. Vhura mapurogiramu ekufonera , kune rumwe rutivi, anofanirwa zvakakodzera kune zvinetso paunenge uchitsvaga inova nemhinduro dzisingatarisirwi dzemibvunzo yakanyatsogadzirwa. Aya ndiwo mapurogiramu ayo munguva yakapfuura angave akangobata kubvunza vashandi. Mipiro inobva kuvanhu vane unyanzvi hune chokuita nebasa, uye kuguma kwekupedzisira ndiyo inonyanya kukosha yezvipo zvose. Muenzaniso wekare wekufona kwakasununguka ndeyeNetflix Prize, apo zviuru zvevasayendisiti nevashambadziri vakashanda pakuvandudza zvigadziridzo zvitsva kuti vataure kuti vashandi vanoona sei mafirimu. Pakupedzisira, kugovera mapurojekiti ekuunganidza zvinyorwa zvakakodzerwa nekuunganidza deta yakawanda. Aya ndiwo mapurogiramu ayo munguva yakapfuura angangodaro akaitwa nevanodzidza pasi pepayidireji vatsvakurudzo kana kuti makambani ekuongorora tsvakurudzo. Mipiro inowanzobva kuvanhu vane ruzivo kune nzvimbo dzinotsvakurudzirwa nevatsvakurudzi, uye chigadzirwa chekupedzisira ndechokusanganiswa kwakajeka kwemipiro. Muenzaniso wekare wekugoverwa kwekuunganidza data ndeye eBird, umo mazana ezviuru zvevadzidzi vanopa ruzivo pamusoro pe shiri dzavanoona.
Misa kubatana kune nguva yakareba, yakafuma mundima dzakadai sedzimwe nyanzvi (Marshall, Lintott, and Fletcher 2015) uye yezvisikwa (Dickinson, Zuckerberg, and Bonter 2010) , asi hazvina kujairika mukutsvakurudza kwevanhu. Zvisinei, nekutsanangura mapurogiramu akabudirira kubva kune dzimwe mamiriro uye kupa zvishoma mazano makuru ekugadzirisa mitemo, ndinotarisira kukukurudzirai zvinhu zviviri. Kutanga, kubatana kukuru kunogona kubatanidzwa mukutsvakurudza kwevanhu. Uye, chechipiri, vatsvakurudzi vanoshandisa kubatana kukuru vanozokwanisa kugadzirisa zvinetso zvaimboita sezviri nyore. Kunyangwe kubatana kukuru kwakawanzosimudzirwa senzira yekuchengetedza mari, zvakanyanya kupfuura izvozvo. Sezvandicharatidza, kushamwaridzana kukuru hakungotibvumiri kuti tiite tsvakurudzo shoma , inotibvumira kutsvakurudza zviri nani .
Muzvitsauko zvakapfuura, wakaona izvo zvingadzidzwa kuburikidza nevanhu munzira zvitatu zvakasiyana: kucherechedza maitiro avo (Chitsauko 2), vachivabvunza mibvunzo (Chitsauko 3), uye kuvanyoresa mukuedza (Chitsauko 4). Muchitsauko chino, ini ndichakuratidza izvo zvingadzidza kuburikidza nekuita vanhu sevashandi vekutsvakurudza. Kune imwe neimwe yemhando mikuru mikuru yekubatana kukuru, ini ndicharondedzera muenzaniso wekufananidzira, kuratidza humwe humwe hunokosha humwe humwe nemimwe mienzaniso, uye pakupedzisira tsanangudzo kuti iyi fomu yekubatana kukuru ingashandiswa sei pakutsvakurudza kwevanhu. Chitsauko chichapedza nemitemo mitanhatu inogona kukubatsira kugadzira iwe pachako maitiro ekubatana pamwe chete.